Ihe mkpuchi mkpuchi silik maka ụgbọala VW
Nkọwa:Cover Cover Silicone maka Vw,Cover Cover Silicone maka ụgbọala,Obere mkpuchi silik Vw
Home > Ngwaahịa > Epeepe mkpuchi Silicone Car > Ihe mkpuchi mkpuchi silik maka ụgbọala VW
Ihe Nlereanya.: VW1201
Earth Co.Ltd di nma, nke nwere ulo oru ngo anyi, ya na onye oru aka ya di elu na otutu afo n'ile anya na-elekwasị anya n'inwe ihe mkpuchi VW silicone . Ugbu a, anyị merela agadi, oru oma na iwu siri ike management mode, magburu onwe ya n'ichepụta ụlọ ọrụ na mbụ na klas oru ike maka silicone remote isi ikpe, nke-eme ka anyị na-akwa àgwà silicone isi cover maka VW . Anyị nwere obi ike na ị ga-enwe afọ ojuju maka mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala magnetic silk maka VW n'ihi na ọ na-emetụ n'ahụ ya, na-enweghị isi, na-enwe mmekọrịta enyi na enyi maka mkpuchi mkpuchi niile nke silicone maka ụgbọala .
2. Ihe mkpuchi mkpuchi mkpụrụ ndụ dị na Silk bụ nke dị na ya .
5. Ọdịdị okpomọkụ: -40 centigrade ruo 240 centigrade.
Ihe mkpuchi mkpuchi VW na -adịghị emerụ ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mma na gburugburu ebe obibi. Mgbe ị na-eji nchekwa nchekwa Silicon Key N'ihi na VW n'aka gị, ọ na-adị nro, dị ụtọ na ìhè. Ị ga-ahụ ihe gbasara VW silicon isi mgbe ị nwere ya.
Ị ga-ahụ mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala silicone mgbe ị nwere ya. Ụdị agba ọ bụla nwere ike ịdọrọ ike
1. 1. mkpuchi mkpuchi ụgbọala ọ bụla
2. 1000pcs silicone key holder na otu katọn
Ọrụ anyị maka njide ihe mbadamba ụgbọala
Cover Cover Silicone maka Vw Cover Cover Silicone maka ụgbọala Obere mkpuchi silik Vw Cover Cover Silicone maka Swift Cover Cover Silicone maka VW Car Cover Cover Silicone maka Polo Cover Cover Silicone maka Honda Cover Cover Silicon maka Mazda